रुपन्देहीका १५ पालिकामा गठबन्धनबाट किन बाहिरियो एकीकृत समाजवादी? | The Mirror
April 27, 2022 April 27, 2022 adminLeaveaComment on रुपन्देहीका १५ पालिकामा गठबन्धनबाट किन बाहिरियो एकीकृत समाजवादी?
रुपन्देहीका १६ वटा पालिकामध्ये १५ पालिकामा माधव नेपालको पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाबाहेक अन्य पालिकामा समाजवादी एक्लिएको हो। समाजवादीले १५ वटै स्थानीय तहमा एकल रुपमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ।
समाजवादीले बुटवल उपमहानगरमा पाँच दलीय गठबन्धनबाट उपप्रमुखमा चिनबहादुर गुरुङलाई उम्मेदवार बनाएकाे छ।
धेरैजसाे पालिकामा गठबन्धनसँग पद बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा एकल रुपमा उम्मेदवारी दिइएको एकीकृत समाजवादी रुपन्देहीका अध्यक्ष राजु गुरुङले बताए।
समाजवादीले नगरपालिका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष गरी नौ जना, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष गरी आठ उम्मेदवारी दर्ता गराएको गुरुङले जानकारी दिए।
गठबन्धनमा आवद्ध अन्य दलले भने समाजवादीले हैसियत भन्दा बढी माग गरेकाले मिलेर जाने अवस्था नभएको बताए।
तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुखमा आशाकुमारी चौधरी र उपप्रमुखमा सन्जिव भण्डारीले उम्मेदवारी दिएका हुन। देवदह नगरपालिका प्रमुखमा छवि भट्टराई, उपप्रमुखमा सरस्वती पोख्रेल, सिद्धार्थनगर नगरपालिका प्रमुखमा कुलेन्द्र पुन, सैनामैना नगरप्रमुखमा देवराज पोख्रेलले उम्मेदवारी दिएका छन्।
समाजवादीले सम्मरीमाई गाउँपालिका अध्यक्षमा अशोक कमुार शुक्ला, उपाध्यक्षमा पवित्राकुमारी निषाद, शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्षमा केशवकुमार खड्का, उपाध्यक्षमा रिना हरिजन, कञ्चन गाउँपालिका अध्यक्षमा रामबहादुर विक, उपाध्यक्षमा पार्वती पौडेल ढकाल, सियारी गाउँपालिकामा श्रीराम यादव, मायादेवी गाउँपालिकामा कपिलमुनी यादवले उम्मेद्वारी दर्ता गरेको जिल्ला सचिव अविराम विकले बताए ।
उनका अनुसार १६ वटै स्थानीय तहमा वडाध्यक्षसहित सदस्यको मनोनयन भएको छ । बुटवल उपमहानगरमा गठबन्धन कायम भए पनि अन्य पालिकामा एकीकृत समाजवादीले कतै एक्लै कतै माओवादी र जसपासँग गठबन्धन गरेको उपसचिव सरिता श्रीसले बताइन्।
अमेरिकामा बाग्लुङ्गका आशिष माथि गाडीभित्रै आक्रमण [भिडियो सहित]